Samsung Galaxy Z Flip 3 nke ọma: Ọdịdị apịrị apị mepere emepe, Nguzogide mmiri, Ngosipụta 120Hz, na ndị ọzọ | Androidsis
Samsung emeela onye isi ekwentị ọhụrụ dị elu, ọ dịkwa na Galaxy Z tụgharịa 3, mkpanaka mpịachi nwere atụmatụ na nkọwa teknụzụ nke gụnyere Snapdragon 888 n'ime yana ọmarịcha atụmatụ na -adọrọ mmasị nke anyị ga -ekwu maka ya n'okpuru.
Ọdụ ụgbọ ala a adịghị ọnụ ala ma ọlị, dịkwa ka ekwentị mkpanaka ndị ọzọ sitere n'ọgbọ gara aga nke ụlọ ọrụ South Korea adịbeghị. Agbanyeghị, njiri mara ya na -eme ka ọ baa uru, ebe ọ na -abịa na nke kacha mma, nke kachasị elu, ma ọ bụ ihe opekata mpe n'ọtụtụ akụkụ ya.
1 Njirimara na nkọwa teknụzụ nke Samsung Galaxy Z Flip 3
Njirimara na nkọwa teknụzụ nke Samsung Galaxy Z Flip 3
Iji bido, Samsung Galaxy Z Flip 3 bụ ekwentị eji eji mpịachi eme ihe nke anyị na -ahụ ihuenyo bụ isi nwere diagonal nke 6.7 sentimita ma bụrụ nke teknụzụ Dynamic AMOLED 2X. Nke a dakọtara na HDR10 +, nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,640 x 1,080 ma nwee oke ume ọhụrụ nke 120 Hz, ihe a na -enwe ekele dị ukwuu. N'aka nke ya, ihuenyo nke abụọ bụ okirikiri 1.9 inch nwere mkpebi nke pikselụ 760 x 527.
N'aka nke ọzọ, Ekwentị a na -abịa na Qualcomm dị ike Snapdragon 888, otu n'ime ndị nrụpụta kacha arụ ọrụ na arụmọrụ kacha mma n'oge a. Ma ọ bụ na chipset processor a nwere ike ịrụ ọrụ n'ogo kacha elekere 2.84 GHz, na mgbakwunye na ọ na-abịa na Adreno 660 GPU, bụrụ isi asatọ ma na-anya isi nha 5 nm na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. usoro nke oriri ike na njikwa.
Ọ na -abịa n'ụdị 8GB Ram yana 128GB na 256GB ohere nchekwa n'ime. Ọ nweghị mgbasawanye site na microSD.
Samsung Galaxy Z Flip 3 na -abịa na modul igwefoto na -atọ ụtọ nke mejupụtara ihe mmetụta bụ isi nke 12 MP nwere oghere f / 1.8 na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ọzọ bụkwa 12 MP ma nwee oghere f / 2.2. Igwefoto selfie nke mkpanaka mpịachi a, nwere mkpebi nke 10 MP na oghere f / 2.4.
Batrị ekwentị a bụ otu n'ime ihe adịghị ike ya, nke 3,300 mAh ikike, ọnụ ọgụgụ nke, ma ọ dịkarịa ala na ọkwa ntụnyere, dara ogbenye na nke mobiles kachasị ọhụrụ, nke sitere na 4,000 mAh ruo 5,000 yana, n'ọnọdụ ụfọdụ, 6,000 mAh. N'ezie, chaja ngwa ngwa abụghị ihe pụtara ìhè site na ọnụnọ ya na ngwaọrụ a, ebe ọ bụ 25 W. Enwerekwa chaja ikuku 11 W na chaja 4.5 W ọzọ.
Akụkụ ndị ọzọ nke ekwentị ọhụrụ ahụ gụnyekwara onye na-agụ mkpịsị aka n'ime ihuenyo, Njikọta 5G, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 band band, Bluetooth 5.1, ndị na-ekwu okwu stereo, ike ịdekọ vidiyo n'ogo 4K kacha na 60 fps (okpokolo agba kwa nkeji). Site na ekwentị a anyị nwekwara nguzogide mmiri ọkwa IPX8 yana Corning Gorilla Glass Victus na -echebe ihuenyo.
IKIRU Isi Dynamic AMOLED 2X nke 6.7 FullHD + nke 2.640 x 1.080 pikselụ na sekọndrị nke 1.9 sentimita nwere mkpebi nke pikselụ 760 x 527 / Corning Gorilla Glass Victus.
Ohere TERLỌ N'IME 128 ma ọ bụ 256 GB (UFS 3.1)
Ndị isi Azụ: Dual 12 + 12 MP / Ihu: 10
UMUAKA 3.300 mAh nwere 25 Watt Fast Charge na 25 W Fast Charge / 4.5 W Reverse Charge / 11 W Wireless Crga
OS Android 11 n'okpuru OneUI 3.5
Njikọ Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 / Bluetooth 5.1 / NFC / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 5G / 4G LTE
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị aka ihuenyo / mmata ihu / USB-C / stereo ọkà okwu / mgbochi mmiri IPX8
Emebela Samsung Galaxy Z Flip 3 n'ahịa Europe (Spain gụnyere, n'ezie) na ọnụ ahịa nke euro 1.059 maka ụdị ya nwere 8 GB nke RAM yana 256 GB nke ohere nchekwa dị n'ime. Enwere ike zụta ya site na Ọgọst 27, mana ọ ga -ebu ụzọ rute n'ahịa US, ma nyekwa ya ụwa niile.
Ọ na -abịa na pink, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, lavender, nwa phantom, ude, ụdị isi awọ na ụdị ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy Z Flip 3 nke ọma: Ọdịdị apịaji emeziri emezi, Nguzogide mmiri, Ngosipụta 120Hz, na ndị ọzọ
Top 9 Alternatives ka VideoScribe